Maro no tsy mahazo fialan-tsasatra mahazendana mahazatra: mihintsana izy ireo, ary aza mangatsiaka. Raha mampiasa ny soso-kevitrao ianao dia ho lasa marevaka ny sakafo matsiro anao ary ny rehetra dia ho toy izany tokoa. Avy amin'io lahatsoratra io no hianaranao ny fomba hanomanana ny moron-koditra mahazatra avy amin'ny ordinatera tsotra, mafana ao anaty vilany.
Mofomamy mamy ao anaty menaka fanosotra misy menaka
tsaramaso ao anaty tranombakoka 1% na 9% (tsy mihoatra) - 500 g
Orangilana misy hoditra malefaka - 1 tapitrisa;
siramamy - 125 g;
atody sokajy C1 - 1;
Orange manasa sy manala ny zesta. Mialà eo amin'ny pulp, squeeze ny sira, alatsaho ao amin'ny mangona, mifangaro ary mialà.
Esory tsimifon-java-manify ny lakandran-jazakely, voasesika eo amin'ny boaty sy ny atody. Ny mangotra mangotra dia manampy ireo singa fototra. Raha mangatsiaka kely ny koba dia ampio lafarinina. Mamolavola ny baolina avy amin'ny koba ary manome azy endrika fohy. Afangaro azy ireo amin'ny barìkely mena ao anaty vilany mafana sy menaka voajanahary. Ho fanampin'ny idealy mahavelona amin'ireo mpividy entana ireo dia tsiro kely kely.
Ahoana ny fomba hanamboarana alika ahodin-tsakafo ao anaty ala iray ao an-tanimboly - tsangambato mahazatra amin'ny manga
trano fandevenana 1% - 375 g;
siraolina - 75 g;
siramamy maitso - 55 g;
Voalohany, manaova fofona fary, ary ampio ny mangotrao, atsipazo ny siramamy ary atodiho ny atody. Araho tsara, mandra-pihaonan'ny homogenité daholo, add vanillin sy siramamy sira. Amin'io fitsapana io, dia mamolavola aloha ny "sausage", 5 cm ny savaivony. Zarao ho faribolana madinika, 1-1.5 cm matevina. Mandrosoa ny menaka ao anaty lafarinina ary manompoa ao anaty menaka fanosotra miaraka amin'ny dibera mandra-panao manandrana labiera mofomamy.
Ny fomba fikarakarana lavan-tsakafo dia mihodina ao anaty fantsom-bokatra
fananana be loatra 9% - 285 g;
sira dia kely - 95 g;
kalitaoma avo lenta - 310 g;
Volana marary ho an'ny fofona.
Ampiasao ny tsaramaso ao an-tranon'omby ao anaty fitoeram-pako mety tsara mba hikolokolo ny koba. Ambeno amin'ny sira, siramamy ary atody. Ny ampahany voalohany amin'ny lafarinina dia mifangaro ary mamafy amin'ny kitay vita amin'ny baka, ampio ny masira ary hohanina tsara. Azonao ampiana ny lafarinina sisa tavela, raha ilaina, ny vanillin. Mifangaro tanteraka ny zava-drehetra.
Manangona koba iray koba, makà kofehy ary miloko kobam-bary. Ataovy manempotra azy izany, ary manamboara mofo boribory miaraka amin'ny sisiny fisaka, manodidina ny 1-1.5 sm mavesatra. Alefaso amin'ny arom-panamboarana menaka voa maina ny kitapo ary manodina ny moron-koditra avy amin'ny andaniny roa amin'ny loko marevaka.
Tody nangatsiaka tamin'ny holatra
Pancakes tsy misy soda
Salady misy voankazo sy siramamy
Ahoana no hanatsarana elatra elatra ao anaty vilany?
Volo amin'ny ronono
Voaisotra maitso - 7 tsara indrindra ny sakafo, mahavariana ny trondro
Seafood - recipe
Kiraro kesika - fomba tsara indrindra
Voangory voatabia anaty soja soja
Marinady ho an'ny trondro eo amin'ny giro
Ahoana ny famokarana kôkômbra?
Viola ampel - mitombo avy amin'ny voa
Ny fomba fanaovana kendrina amin'ny kapila
Mesotherapy - fifanoherana
Grassstone - fampiharana
Fanaovan-jiro noho ny fahaverezan'ny lanjany sy ny fampiasana sporotom - ireo karazana mahomby indrindra
Models amin'ny akanjo amin'ny fahavaratra 2014
Jennifer Aniston namela malalaka an'i Brad Pitt, noho ny nahatonga ny fahatezeran'ny vadiny ...
Inona no fanandramana tokony hatao rehefa manomana vohoka mba hitoe-jaza zazakely?
Mikksomatoz amin'ny bitro - famantarana ny aretina sy ny fomba fitsaboana azy
Fanafihana sy ny bateria